ခင်နှင်းယု - ဝီကီပီးဒီးယား
(၁၉၂၅-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၉"။-0၇)စက်တင်ဘာ ၇၊ ၁၉၂၅
ဇန်နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၃(၂၀၀၃-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-၂၁) (အသက် ၇၇)
ဦးဘ + ဒေါ်သိန်းတင်
ခင်နှင်းယု (အမည်ရင်း မခင်စု) (၁၉၂၅-၂၀၀၃) သည် မြန်မာစာပေလောကတွင် ထင်ရှားသော အမျိုးသမီးကလောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဝါးခယ်မမြို့၌ အဖ အစိုးရကျောင်းဆရာကြီး ဦးဘ၊ အမိ ဒေါ်သိန်းတင်တို့မှ ၁၉၂၅ခု၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင်ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ခုနစ်ယောက်အနက် ငါးယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့်မောင်နှမ ဝမ်းကွဲတော်စပ် သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၅ဝ တွင် ဗိုလ်ကြီးကျော်သောင်းနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ကာ ၁၉၇ဝ တွင် ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ မှ ကျန်းမာရေးအလွန်ဆိုးရွားသောကြောင့် ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူ ပြီးနောက် "ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ" တွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နံနက် (၈:၃၀) တွင် ရန်ကုန်ပြည့်သူ့ ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သည်။
၁၉၃ဝ တွင် ဝါးခယ်မမြို့ ဦးဘိုးထင် မြန်မာစာသင် အလယ်တန်းကျောင်း၌ စတင်ပညာသင်ကြားသည်။ ၁၉၄ဝ တွင် ဝါးခယ်မမြို့ ဦးဘိုကြီးမြန်မာစာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ရှစ်တန်းမှ ဆယ်တန်းတိုင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၄၃ တွင် မြန်မာဆယ်တန်းနှင့် ၁၉၄၈ တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်း မှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ တွင် သက်ကြီးတက္ကသိုလ်၊ ၁၉၅၉ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
ဝါးဆယ်မကျောင်းသားသမဂွ အမှုဆောင် (၁၉၃၈ -၃၉) ဖြစ်ကာ ကျောင်းသားရေးရာများနှင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ် ဝါးခယ်မမြို့နယ် အာရှလူငယ်အစည်းအရုံးတွင် အမျိုးသမီးဌာန အတွင်းရေးမှူး (၁၉၄၃)၊ ဖဆပလ သတင်းနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးဌာန လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး (၁၉၄၆)၊ ယင်းဌာန တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဖဆပလ သတင်းစဉ် တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ (၁၉၄၇)၊ ဝန်ကြီးချုပ်၏ အတွင်းရေးအတွင်းဝန် (၁၉၄၈- ၄၉) စသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၄၆ မှစကာ "မခင်စု" အမည်ရင်းဖြင့် ဖဆပလ သတင်းစဉ်တွင် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၄၇-တွင် "အချို" ကလောင်အမည်ဖြင့် သတင်းစုံ ဂျာနယ်၌ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခဲ့သည်။ ခင်နှင်းယု ကလောင်အမည်ဖြင့် ပထမဆုံးရေးသောဝတ္ထုမှာ ၁၉၄၇ "စာပဒေသာမဂ္ဂဇင်း" တွင်ပါရှိသည့် "အရိုင်း" ဖြစ်သည်။ လုံးချင်းဝတ္ထု (၁၇) အုပ်၊ မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည် အပုဒ် (၂၀)၊ ဝတ္ထုတို (၁၀၀) ကျော်ခန့်ရေးသားခဲ့သည်။ စာဆို၏ ဝတ္ထုတိုအချို့ကို ဂျာမန်၊ ရုရှား၊ ဂျပန် ဘာသာများသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
မျှော်လင့်လို့ဖြင့် မဆုံးနိုင်တယ် (၁၉၆၁)
ပိုးခန်းဆီးနောက်မှ ငရဲခန်း (၁၉၆၂)
လာခြင်းကောင်းသော လူကလေး (၁၉၆၉)
ထိပ်စုဖုရား မဗျိုင်း (၁၉၇၃)
တစ်ထောင့်ငါးရာည၏ အိပ်မက်များ (၁၉၉၃)
ဥဩတွန်တဲ့ လရာသီ (၂၀၀၂)
ဘုံဓမ္မတာမှာ ကြုံလေသမျှ (၁၉၆၂)
ကြာတော၌ရွာသောမိုး ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၆၄)
ကသစ်ပန်း ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၆၅)
ခင်နှင်းယု၏ ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၆၇)
ကျွန်းဧကရီနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (၁၉၇၁)
မိန်းမတို့အကြောင်း ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ် (၁၉၉၂)
လက်ရွေးစင် ဝတ္ထုတိုများ (၁၉၉၆)
ကျွန်မကမချောပါဘူးနှင့် အခြားမဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုများ (၂၀၀၄)
ပွဲတွေ့ အမြတ်တရား (ဘာသာရေးဆောင်းပါးများ) (၁၉၈၁)
၁၉၄၈ - လွတ်လပ်ရေး အထိမ်းအမှတ် စာပေပြိုင်ပွဲ (ဝတ္ထုတို - တတိယဆု) - "မျောက်လောင်း"
၁၉၅၃ - မြဝတီမဂ္ဂဇင်းစာပေပြိုင်ပွဲ (ဝတ္ထုရှည် - ပထမဆု) - "သရဖူ"
၁၉၆၁ - စာပေဗိမာန်ဆု - "ကြေးမုံရိပ်သွင် ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်"
၁၉၉၅ - အမျိုးသားစာပေဆု (ဝတ္ထုရှည်) - "မြကြာဖြူ"
ရွှေမျှား၊ ဒဂုန်။ မြန်မာနိုင်ငံစာပေဆုများ
မလိခ။ မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်း (၂)
U Thaung (Aung Bala) (1981)။"Contemporary Burmese Literature". Contributions to Asian Studies. 16: 81–99
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခင်နှင်းယု&oldid=714481" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။